21 qof oo ku xanniban goob macdanta laga soo saaro dalka Shiinaha | Star FM
Home Caalamka 21 qof oo ku xanniban goob macdanta laga soo saaro dalka Shiinaha
21 qof oo ku xanniban goob macdanta laga soo saaro dalka Shiinaha
Wakaaladda wararka ee dowladda Shiinaha ee Xinhua ayaa ku warramaysa in 21 qof oo macdan qodoto ah ay weli ku xanniban yihiin goob macdanta laga soo saaro oo ku taalla gobolka waqooyi galbeed ee Xinjiang.
Tani ayaa timid ka dib markii ay goobtaasi duntay.
Ilaa iyo hadda waxaa la soo badbaadiyay 18 qof oo ka mid ah macdan qodotada gobolkaas.
Bishii koowaad ee sanadkan ayay ahayd markii la xaqiijiyay dhimashada 10 qof oo ka mid ah dadka ka ganacsado soo saaridda macdanta ee Shiinaha ka dib qarax laga soo tabiyay gobolka xeebta dalkaas ee Shandong .
Previous articleHoggaamiyaha dalka oo casuumay madaxweynaha Tanzania
Next articleDHAGEYSO:Aadan Barre oo dhaliil u jeediyay dowladda ismaamulka Garissa